IPhone-kaagu hadda wuxuu kaa dhigi karaa espresso meel kasta oo aad tagto | Wararka IPhone
Riyada dadka qaxwada qabatimay waxay uga dhawdahay sidii hore inay rumowdo daboolkan u adeegaya, wax intaa kabadan iyo wax kayarba, in kabadan kafeega meelkasta oo aan tagno Sidee? Helitaanka dukaamada qaxwaha ee kuugu dhow oo lagu soo bandhigo barnaamij? Wicitaanka adeegga adeegaha degdegga ah si aad noogu keento uumigayaga, cabbitaanka xiiqsan isla markiiba? Maya kaliya foorari aaladdayada oo aan u oggolaanno qulqulka dareeraha dhanka weelka.
Haddii ay jiraan wax wanaagsan oo ku saabsan Kickstarter, waa inaanay waligood joojin doonin naga yaabinta, taas oo aan ku leenahay labada mashruuc iyo mashaariicda bilaabaya ololahooda lacag ururinta. Marka maanta waan arki karnaa kiis iPhone ah oo leh farsamo xariif ah oo noo oggolaan doonta inaan ku raaxeysano espresso wanaagsan kulul waxaan joognaa meesha aan joogno.
Farsamadu waxay ka kooban tahay galmo - xoogaa dhib badan, dabcan - taas oo ay ku jirto gulufyada qaarkood ayaa la geliyaa kuwaas oo lagu kululeeyo iyada oo loo marayo iska caabin markaan ku muujino barnaamijkeeda u gaarka ah si aan ugu guuleysano isku xirnaanta uumiga dhowr ilbiriqsi gudahood. In kasta oo waxtarkeeda iyo wax qabadkeedu shaki ku jiro maalinba maalinta ka dambaysa, haddana hubaal waxay noqon kartaa hab asal ah oo lagu raaxeysto kafeega waqti kasta oo la bixiyo. Sidee bay noqon kartaa si kale, waxaa abuuray Talyaani. Hadda waxaan dhihi karnaa iPhone-keena waa mid casri ah oo xitaa quraac noo diyaarinaya.
Mashruuca, sidaan nidhi, waxaa laga heli karaa barnaamijka 'Kickstarter' ee dadka ka soo ururaan Waxaana uu durbaba ururiyey ku dhowaad 4.000 euro oo ah hadafkiisa oo ah € 75.000. Abuurayaasheeda waxay cadeynayaan inaysan jirin wax khatar ah haba yaraatee maalgashigan (wax walwal sii kordhaya ka qaba dadka taageera ololahan) iyo guryaha, waxaa loo heli karaa iPhones 6, 6 Plus, 7 iyo 7 Plus waxay bilaabi doonaan inay yimaadaan deyrta. A priori uma muuqato inay tahay mid ka mid ah alaabooyinka aakhirka abuuraya isbeddel, laakiin waxyaabahaas marna ma ogaan doontid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Maalintii baa timid: isdeji oo taleefankaaga iPhone ha kaa dhigto qaxwahaaga
Maalgelinta ayaa la joojiyay
Maalgelinta mashruucan waxaa hakiyay shirkadda Kickstarter qiyaastii. 1 saac.
taasi waxay ahayd waxa aan qori lahaa hadda
Netflix bilaash ma noqon doonto sanad, rumaynta noocyada "hadiyadaha" waxay keeneysaa dhibaatooyin